Best Holidays Canal Oo River Doon In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Best Holidays Canal Oo River Doon In Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 26/09/2020)
Socotada raadinaya ee Holidays Best Canal iyo River Doon Yurub xasilli karto fudud og Europe ayaa indhaha oo Calaamaysan. Si kastaba ha ahaatee, in la ogaado meesha uu u aadi karo shiraaca ugu fiican vacation weligaa, aad leedahay in la sameeyo cilmi-baaris qaar ka mid ah. Waxaa jira shan dal oo la kanaalka fantastic iyo fursadaha fasax riverboat.
oo dhan waxaad iyaga soo booqan kartaa, ama doorato mid ka mid ah jiidanaya aad ugu. Waa maxay gaar ah waa in aad ku socoto in ay leeyihiin qaar ka mid ah kanaalka iyo webiga raacid caanka on ciidaha, kuwaas oo. Halkan waxaa ku qoran shan kanaalka iyo riverboat fasaxa our sare ugu fiican Yurub:
1. Fasaxyada Canal iyo River Doon in France
France waa dal aad u qurux badan oo leh meelo badan oo suurtagal ah channel ama riverboat fasaxa. A yar oo ka mid ah gobollada France istaagaan soo baxay ee la xidhiidha in: Midi ah, gobolka of Aquitaine, iyo Camargue ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay leedahay tayo gaar ah.
Ta hore waxa weeye Canal du Midi, a Heritage Site World iyo biyo mareen waxay ugu da'da weyn macmal ah Europe in weli socota ay dabcan asalka ah. Tani shaqada ee Pierre Paul Riquet dhamaystiray 1681. Jidka, hoos ka saaciday inay Midi ah, waxaad ka arki kartaa Le Somail iyo Carcassonne, laba degsiimo Dr Makumbe soo jiidasho. Oo haddaad jeceshihiin Cunto wanaagsan iyo khamri weyn, waxaad isku dayi kartaa Minervois caanka Midi iyo Corbieres, iyo cassoulet, a taxadir degaanka.
Koonfurta France ee Camargue waa wax yar oo dheeraad ah casri ah, oo leh cimilada qoraxdu u qurux badan oo soo dhawaataan badda Mediterranean. Marka aad safar Camargue ah, waxaad ku baran kartaa nooca xaqse oo Kobvanheegan. Waa maxay more, meelaha magaalooyinka ah waxaa kale oo jira meheradaha yar soo jiidasho si aad u aragto.
Ugu dambeyntii, Aquitaine qalbigaaga qabsan doonaan sida aad safar iyada oo ay luscious dooxooyinka, eegto waterfalls iyo qarar breathtaking. Waxaa jira dad badan oo la wadooyinka in ay qaataan, oo ay ku jiraan aadeen hoos Charente Webiga. In France, iyo jid kasta oo aad qaado waa faraxgelinta, oo la kulmaya si buuxda waa dareen cajiib ah.
2. Fasaxyada Canal iyo River Doon in Italy
Marka aad ka fikirto channels iyo Italy, waxa ugu horeeya ee ku soo dhaca maskaxdooda yahay Venice. haro badda The uguurtay waa waasac, gooyaa iyada oo la kanaalada, oo waxay bixisaa a waayo-aragnimo u gaar ah u safraya oo jecel doon. Laakiin xitaa ka badan si aadeen ee kannaallada of Venice laftiisa, xeebaha Talyaaniga waa a laftiisa muujiyo.
Bilow, waxaad booqan kartaa jasiiradaha faraxgelinta Torcello, Burano, iyo Murano in badan in ay bixiyaan. Haddii aad rabto, waqti ka mid ah dukaamo ay ku takhasusay badan. Haddii aadan, had iyo jeer aad u dhoofo karaa in magaalada Venice laftiisa. biyo mareen kasta waa mid aad u qurux badan halkaas, gaar ahaan marka cimilada wanaagsan yahay. Guurto on in ay River Brenta ama Sile River for tours more muuqaal dabiici ah ee Talyaani ah baadiyaha.
Italy ayaa heshay badan in ay bixiyaan Wabiyaal ay u qurux badan, iyo kanaalada of Venice tahay waa-arki. Haddii aad rabto inaad aragto sida ugu fiican ee indhaha Yurub iyo biyaha fiican, waxaad ka heli doontaa in Italy.
3. Fasaxyada Canal iyo River Doon in Germany
Germany Ma laga yaabaa in meesha ugu horeysa ee aad ka fikirto marka kanaalka ugu fiican iyo fasaxyada riverboat Yurub waxaa ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, wadankan waxaa ka fog dhiman biyaha u qurux badan si ay u sahamiyaan. Laba gobollada kale Istaaga: Mecklenburg iyo Brandenburg, iyadoo ay soo jiidasho leh kanaalada iyo harooyinka ku hareereysan kaymaha xaqse.
Waa maxay gaar ahaan soo jiidasho waa in ay la socdaan sida aad ka arki kartaa daaraha waaweyn oo cajiib ah, Daar Dr Makumbe, iyo magaalooyinka jir quaint. Oo kuwa jecel nooca shaki ku raaxaysan doonaa cidlada unspoiled iyo qaninimo ah duur-joogta ah.
Berlin laftiisa uu leeyahay buundooyinka badan xitaa Venice sameeya, iyo ku dhawaad 100 kanaalada si ay u sahamiyaan. Si kastaba ha ahaatee, kanaalka Jarmal iyo quudhin fasax riverboat kale oo aad qaadan karto dhinaca aabbo iyo Brandenburg. Ha ka maqnaan fursad si ay u sahamiyaan Germany sidan u gaar ah iyo baashaal.
Belgium waxay leedahay gunno aad u wanaagsan Dhinaceeda marka ay timaado maalmaha ciidaha ugu wanaagsan iyo webiyada webiga ee Yurub. bonus Tani waa gobolka Vlaamse iyo quruxda biyaha ay. Inkastoo biyaha Belgian ma aha dhaqanka ee dareenka qurbaankii xeeran miyiga breathtaking, Dhab ahaan waxay aad qaadi karto si qaar ka mid ah meelaha xiiso leh.
Tusaale ahaan, Bruges sida xaqiiqada ah oo qiimihiisu yahay booqashada, iyo waxa ay sahaminta by kanaalada ka dhigaysa safarka wuu ka xiiso badan. Waxaa jira jacayl cayiman oo hawada Bruges ah, la mid ah Venice. Iyo qaab-dhismeedka Dr Makumbe soo jiidasho iyo shukulaatada dukaamada ku dar oo kaliya in ay ku jawi.
Markaas waxaa jira Ypres, meel cajiib ah oo ka buuxa muhiimadda taariikhiga ah iyo indhaha Vlaamse gaar ah, dhawaaqyada, iyo dhadhan. Dhoofo aad u soo delicious Belgian shokolaatada handmade, ama firfircoon oo adag qamri Belgian. wadanka aad u soo dhaweyn doonaa farxad saafi ah dareenka oo dhan.
No liiska Meelaha ugu fiican Yurub waxay noqon kartaa mid dhamaystiran oo aan Holland. Taas waxaa ka mid ah Meelaha bixiya channel iyo riverboat fasaxa ugu fiican Yurub. dalka ee biyaha lahaa in la helo meel liiska, aaneynayo views ay cajiib ah, wadooyinka muuqaal dabiici ah iyo Ladnaanta iyo xasilloonida ee shiraaca.
baadiyaha Holland iyo biyaha ay bixiyaan waayo-aragnimo weyn. Malaha meel kale oo ku faani kara maraakiibtaas si habsami leh u socota tuulooyin yaryar iyo waxa ku xigay aragtiyo aad u qurux badan. Bal qiyaas by dhaqanka-raadinta maraya Falkenberg Dutch, iyagoo muuqaalka garan karo iyo soo jiidashada. Bal qiyaas eegaya tulips ah dhaqdhaqaaqayeen in neecaw iyadoo loo marayo gobolka Faarisi maraya.
Qorshaynta Fasax Riverboat ah ee Europe? Ballansan Your Tigidhada in Tareenku la Save A Tareen oo wuxuu ku raaxaysan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-canal-river-boat-holidays/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#canal #riverboat #safar europetrains eurotrip trainjourney